Daalụ Ihe Dị Mma Maka Enyi! | Martech Zone
Maka ndị gị chọpụtara na m furu efu pụọ na ụgbụ na ngwụcha izu a, ana m arịọ mgbaghara maka ịghara ịdebanye ederede ma ọ bụ abụọ. Anyị nwere ntakịrị nsogbu nke ezinụlọ n'ụlọ nke na-adọrọ uche m na ume m niile. N'agbanyeghị otu blọọgụ m siri dị mkpa na idebe aha m n'ịntanetị, onweghị ihe dị mkpa dịka ezinaụlọ.
Enwere m nnukwu ekele maka ndị enyi m, n'ịntanetị na n'ịntanetị, n'oge nsogbu ndị a. Enwere m ozi ịntanetị ole na ole na ngwụsị izu a na-ajụ ma ọ bụrụ na ihe niile dị mma. (Ọ dị mma ma, mana ọ ga-aga ebe ahụ.)
N'ikwu okwu banyere ndị enyi, nke a bụ ọkwa nke m bu n'uche ime nwa oge. Ezigbo enyi na ibe Agwa Fiend, Jason Bean (enweghị mmekọ) dere post Douglas KarrEnyi.
Ihe niile malitere mgbe Jason na-edozi igwefoto ya iji see foto nke oge anyị abụọ. M na-akwa emo na-eguzo ebe ahụ na ogwe aka m gburugburu ya ma were foto ahụ. Mgbe ahụ, anyị chepụtara n'echiche ime ọkwa ma mee ka ndị ọzọ 'jupụta' wee bụrụ enyi m. Lee nzaghachi anyị nwetara!
Anaghị m agbanye John Uhri n'isi, aga m agbanye ya na igwefoto ma igwefoto jidere ya!
Ahụla m Lorraine na di ya oge ole na ole na mmemme mpaghara ma anyị enweela obi ụtọ na ụlọ ọrụ ibe anyị ntakịrị (opekata mpe m nwere olile anya na ha masịrị m!) Echere m na anyị dị ka ezinụlọ jikọtara ọnụ!
Michelle's blog bu ihe ohuru nye m - mana enwerem obi uto na okwu ya. Enwere m olileanya na anyị nwere ike izute Michelle ma nwee iko kọfị ahụ!
Mpaghara pọdkastị mpaghara, na onye ọchụnta ego na-enweghị atụ, Darrin Snider ọbụna were oge iji mee ihe! M zutere Darrin na Kpọmkwem Ngwaọrụ ma nwee obi ụtọ na mkparịta ụka anyị. Enwere m olile anya ị gafere ụzọ ọzọ n'oge adịghị anya!
Ka nwere ike ịbanye na ntụrụndụ! Nke a bụ foto izizi na ị nwere ike Photoshop onwe gị! Ka ị na-enwekwu ndị enyi, ọ ga-aka mma!
Tags: ngosiftcihe ọsịseiwu na-akwadoghịiwuogbako ahiaAtụmatụ slideshareechiche
Aug 4, 2008 na 9: 46 AM
Mara na nke a pụtara na ị nwetaghị ngwa nkwụnye Google dị mma wee wuo ya mgbe ahụ. Olileanya ihe na-edozi ọbụna dị ka ụbọchị na-aga. Na-ezi ezi ezie na, ọ dịghị ihe dị mkpa karịa ezinụlọ m. Ihe ịma aka a bụ otu ị ga - esi wepụta oge iji soro ezinụlọ gị nọrịa yana iwepụta oge iji mee ihe ndị ahụ ị ga - eme ka ị nwee ike lekọta ma lekọta ha. Ekwenyesiri m ike na anyị ga-ahụ gị na Cup Bean n'oge na-adịghị anya.
Aug 4, 2008 na 2:34 PM
Achọrọ m iwu ngwa mgbakwunye ahụ!
Daalụ maka nkwado (na ọbụbụenyi) Jason! Aga m ahụ gị n'egwuregwu Bean n'abalị a!